आवश्यकता अनुसार हतियार उठाउने छौंः सुवेदी – Daunne News
आवश्यकता अनुसार हतियार उठाउने छौंः सुवेदी
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य एवम् प्रदेश ४ का इन्चार्ज एवम् सेक्रेटरी चन्द्रहरि सुवेदीको जन्म २०१६ माघ २० गते भएको हो । चितवनको विरेन्द्र क्याम्पसमा आइएमा अध्ययनरत रहेको बेला २०३६ बैशाख २ गते चौथो सेमेस्टरको परीक्षा वहिस्कार गरेर पाकिस्तानको पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोको फाँसी विरोधी आन्दोलनबाट सुवेदी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । उक्त आन्दोलनबाट विद्यार्थी संगठनमा हुँदै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका सुवेदीले २०३७ साल चौथो महाधिवेशन नामक कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएका हुन्। मोहन वैद्य, निर्मल लामा र मोहन विक्रमको एकीकृत चौथो महाधिवेशनबाट पार्टी फुट भएपछि सुवेदी २०४० सालमा मोटो मशाल पार्टीमा लागेर हालसम्म निरन्तर क्रान्तिमा लागेका छन् ।
पछिल्लो समय १० बर्षजनयुद्धमा अग्रपंक्तिमा रहेर क्रान्तिको नेतृत्व गरेका सुवेदी अहिले पनि क्रान्तिकारी पार्टीमै लागेर नयाँजनवादी क्रान्तिमा होमिएका छन् । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य एवम् प्रदेश ४ का इन्चार्ज एवम् सेक्रेटरी चन्द्रहरि सुवेदीसँग पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको गतिविधिमा आधारित रहेर रामकुमार श्रेष्ठले कुराकानीको सम्पादित अंश …. …. … …..
विप्लवसँगको पार्टी एकताको कुरा र हतियार उठाउने कुरा पछिल्लो समय भाइरल भएर आयो, वास्तविकता के हो ?
विप्लवसँगको पार्टीको एकताको कुरा अहिलेलाई टुंगियो, उहाँहरुसँग अहिले पार्टी एकता सम्भव छैन । हतियार उठाउने कुरा राज्य सत्ता उल्टाउनको लागि हो । हतियार कहिले उठाउने भन्ने कुरा ठोस परिस्थितिको ठोस विष्लेशणमा भर पर्छ । हाम्रो कार्यदिशामा नै नेपाली विशेषता अनुसारको सशस्त्र जनविद्रोहद्वारा नयाँजनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराले नै यो कुरा प्रष्ट पार्छ ।
क्रान्तिकारी पार्टी जुट स्पिडमा जानु पर्ने हो त्यो गएन भन्ने चर्चा बढी हुन थालेको छ, अब पार्टीले हतियार उठाउने तयारी नै हो रु
कुनै पनि पार्टी सधै भरी एकै स्पिटले अगाडि बढ्दैन । एउटाले अर्कोको राज्यसत्ता पल्टाउने कुर चानचुने होइन। कसैले चाहाँदैमा तुरुन्त भईहाल्ने होइन। महान माक्र्सले भन्नु भएको छ सामाजिक परिवर्तन १० बर्षमा पनि भईहाल्न सक्छ, एक सय बर्ष पनि लाग्न सक्छ हजार बर्ष पनि लाग्न सक्छ । त्यसलाई त हामीले गति दिने मात्र होे।
यो राज्य संरचनाको विरुद्ध आन्दोलित पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी तर त्यो किसिमको गतिविधि त हुन सकेन त?
हामीले चालिरहेका छौं, अहिले भरखरै देखिने गरी क्रान्ति भनेको कुरा ठूलो कुरा हो त्यो त एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई पल्टाउने कुरा हो। १ डिग्रीमा पानी ताती रहेको बेला पानी तातेको कुरा कसरी थाहा हुन्छ र सय डिग्रीमा तातेसी मात्र थाहा हुन्छ। त्यसैले त्यो भन्दा अगाडिका सबै गतिविधिहरु अगाडि बढी रहेको छ। यो सरकारप्रति, यो राज्यसत्ता प्रति तिव्र घृणा छ सबैको, जुन रुपमा यो सरकार प्रति, राज्यसत्ता प्रति जनताको घृणा छ त्यो रुपमा यो पार्टीले पार लाग्दैन कि भन्ने पुरै विश्वास पनि छैन, त्यसको बीचमा ग्याब भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको मात्र हो। नत्र त सबभन्दा बढी इमान्दार, सादा जीवन उच्च विचार राख्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, खान पनि नसक्ने, खानपानी नचाहाने पार्टी भनेर हाम्रो पार्टी भन्छन् जनताले। यस कारणले हाम्रो पार्टीमा रणनीतिमा क्रान्ति गर्नेमा इमान्दारितामा कुनै समस्या छैन। तर जुन आवश्यकताको आधारमा हामीलाई विश्वास गर्न पर्ने हो। त्यो हामीले माग गरेर पनि हुँदैन। त्यो भईसकेको छैन। तर पनि हामीले पनि जति गर्नु पर्ने हो त्यो पनि हाम्रा कमीकमजोरी छन् सीमा र समस्याहरु छन् ।
क्रान्ति क्रान्ति भन्ने तर जति सडकमा वा बाहिर जनतामा क्रान्तिको स्पिड देखिन पर्ने हो। ठोकठाक पारेर जाने सडक तताउने त्यो पनि कम भएको होइन र?
हाम्रो त नेपाली विशेषता अनुसार सशस्त्र जनविद्रोहद्वारा राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने भन्ने हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य लाइन छ त्यसमा हामी दृढ छौं। त्यो कहिले काही चाही अलि बढी मुखरित भएर देखा पछि कहिले काही विभिन्न कारणहरुले निधारण गर्छ। नेपालको जनसंख्याको ६२ प्रतिशत जनताहरु खेतीपातीको काम गर्छन अहिले बर्षामा आन्दोलन सुस्त देखिन्छ। त्यसैले सधैंभरी एकैनासले ग्राफ अगाडि बढ्दैन। अपडाउन भएर तलमाथि तलमाथि हुँदै बढ्ने हो।
नेपालमा क्रान्ति यही पुस्ताले देख्न पाउ“छ कि अर्को पुस्ता नै कुर्न पर्ने हो?
क्रान्तिको भविष्यवाणी गर्न सकिदैन। क्रान्तिकारी पार्टीमै लागेपछि मेरो बाजे वित्नु भयो बुवा वित्नु भयो, अब मेरो पालो नि आइसक्यो, मेरो पालामै क्रान्ति हुन्छ भनेको भए माक्र्सले सिद्धान्त नै बनाउँदैन थिए, उसले क्रान्ति नै देख्न पाएन, आफ्नो देशमा बस्न नि पाएन, त्यसैले यो क्रान्ति त निरन्तर प्रक्रिया हो।
मैले फेरि पार्टी एकताको कुरातर्फ मोडे विप्लवसग के कुरा नमिलेर पार्र्टी एकता हुन सकेन ?
हामीले पार्टी एकताको लागि छ वटा बुँदा अगाडि सारेका छौं। ति बुदाहरुमा मुलभुत रुपमा कुरा मिल्न सकेन, विप्लवले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति भन्छ, प्रचण्ड र ओलीले नि वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति भनेको छ। विप्लवका २० जना भन्दा बढी केन्द्रिय सदस्य विप्लवको पार्टी छाडेर प्रचण्डकोमा गए। बरु क्रान्तिका कुरा त प्रचण्डसँग मिल्छ। तै पनि विप्लवको क्रान्तिकारी स्पिड भएको हुनाले र रुपान्तरण गर्नको लागि बारम्बार कोसिस गर्यौं र हामीले टिमबद्ध वार्ता गरौं भनेको विप्लवजीले मान्नु भएन। उहाँको पार्टी भित्र कतिपय क्रान्तिकारी साथीहरु क्रान्तिकारी शक्ति त्यसै खेर जाने भयो।पार्टी एकता गर्नु पर्यो भनेर कयौंले फोन गर्नु हुन्छ। हामीले टिमबद्ध वार्ता गरौं भन्दा विप्लवजीले नमान्नु भएको कारणले हामीले एक बर्षदेखि वार्ता गरेका छैनौं वहाँसँग।
अन्य क्रान्तिकारी पार्टीहरुसगको एकताको कुरा छ कि छैन ?
एकताको कुरा भन्दा पनि धु्रवीकरणको कुरा अगाडि बढेको छ। एजेण्डा मिल्ने मुद्दाहरुमा सँगसगै आन्दोलन गर्ने जस्ता कुराहरुमा धु्रवीकरण हुँदै गएको छ।
पश्चिम नवलपरासिमा किशोर किशोरीहरुलाई जिवनवृति योजना सम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न,